दस्तावेज विहीबार, असोज ३०, २०७६
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि राजा त्रिभुवनले सेक्रेटरी नियुक्त गरेका भारतीय नागरिक गोविन्दनारायणले नेपालका गोप्य दस्तावेज र लिखतहरूमा कति चलखेल गरे होलान् !
नेपाली इतिहास केलाउँदा कतिपय विचित्रका घटना र तथ्यसँग जम्काभेट हुन्छ । कतिले रोमाञ्चित पार्छ, कतिले खिन्न तुल्याउँछ । सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक हो हाम्रो । तर, २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भएपछि राजाका सेक्रेटरी भने विदेशी नागरिकलाई बनाइएछ ।
राजा त्रिभुवनका सेक्रेटरी हुने विदेशी थिए, भारतका गोविन्दनारायण । उनी ब्रिटिश राजको भारतमा आईसीएस (इण्डियन सिभिल सर्भिस) उपाधि प्राप्त थिए ।
शक्तिसम्पन्न परमाधिपति राजाले आफ्नो सेक्रेटरी विदेशी नागरिकलाई किन राखे ? यो प्रश्न रहस्यमय र अनुत्तरित छ । ७ कात्तिक २००८ मा गोविन्दनारायणले श्री ५ को सेक्रेटरीको जिम्मा लिएको समाचार गोरखापत्र मा आयो ।
समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार, तीन वटा दफामध्ये दफा १ मा ‘श्री गोविन्दनारायण आई.सी.एस.ले श्री ५ महाराजाधिराजको सेक्रेटरीको काम लिएका छन्, निजले नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिशनलाई सल्लाह दिने काम जस्ता अरू कामकाजहरू जो निजलाई सुम्पिनेछन् सो गर्दै रहनेछन्’ भनिएको छ ।
यस्तै, दफा २ मा १० उपदफा राखी सेक्रेटरीका काम र अधिकार थप खुलाइएको थियो ।
राजा त्रिभुवन । तस्वीर : विकिपिडिया
त्यस बखतको नेपाल विधान र ऐन कानून बनाउने मामलामा पनि कमजोर रहेछ । २००४ सालमा वैधानिक कानून देशकै विधिवेत्ता तथा कानूनवेत्ताहरूले तयार गरेका थिए ।
तर, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिका प्रवर्तकहरूले आफ्नै मुलुकका कानूनवेत्ताहरूमाथि विश्वास नगरेरै होला, २०१२ सालमा कानून आयोग बन्दा भारतीय नागरिक मुर्देश्वरलाई कानूनी सल्लाहकार राखिएको रहेछ ।
मन्त्रिमण्डलको कागजपत्र लगायत श्री ५ महाराजाधिराजको आदेश वा सूचनाको निमित्त मन्त्रालयहरूबाट आउने सबै सरकारी साध–सोध लेखापढीहरू, श्री ५ महाराजाधिराजको विशेषाधिकार प्रयोग, अनुरोध सम्बन्धी बिन्तीपत्रहरू, सरकारी लेखापढी, गैरनेपाली सरकारी पदाधिकारीहरूलाई श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सने भेट मुलाकात र अरू नियुक्तिका कामहरू, जनसाधारणसँगको सम्बन्ध श्री ५ को सचिवालयका कर्मचारीहरूको कामकाज र अदव सम्बन्धी नियन्त्रण र निजहरूको नियुक्ति पनि उनैले गर्ने उल्लेख छ ।
लोकदर्शनले पुस्तकमा अर्को रहस्योद्घाटन पनि गरेका छन् । राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा भारतको सहयोग लिन दिल्ली गएको विषयमा देहरादुनमा बसेका जुद्धशमशेरकहाँ चिठी पठाएका रहेछन् ।
त्यसको जवाफमा जुद्धशमशेरले ठाडै भने रे, “महाराज सरकारले देश त्यागेर अर्काको देशमा (शरण) आएर राम्रो गरिबक्सेन । आफ्नो गद्दी छोडेर सवारी हुनुपर्ने किन ? त्यो मोहनशमशेर पनि कस्तो काँतर !
श्री ३ को पगडी त्याग्न सक्दैन ? म भए बुझाइदिन्थें । महाराजाधिराज सरकारलाई बिन्ती गरिदिनु । पछि हिन्दुस्तानले हेप्नेछ, ङ्याक्नेछ । राम्रो भएन, राम्रो भएन ।”